Kurumidza kuritanga. “Paunongoziva kuti une basa rokuita ibva watoritanga. Kana uchizoriita pava paya ingorinyora pasi uye nemaitiro auchariita kuitira kuti usazozvikanganwa.”—Vera.
Zano “Ronga maitiro auchaita basa rako. Kuti ubudirire unofanira kunge uri munhu akarongeka uye anoda kuita maererano nemarongero awakaita. Kuita izvi kunoshanda, nokuti unogona kupedza zvose panguva yaunofanira kupedza.”—Abbey.
Funga zvakaipira kunonoka kuriita. Ukaverengera kuita zvinhu, unowedzera kunetseka uye zvinoita kuti usabudirira. Bhaibheri rinoti: ‘Unokohwa chaunodyara.’—VaGaratiya 6:7, Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi.
Zano “Zviudze mupfungwa kuti une basa raunofanira kuita uye hapana chauchabvumira kuti chikuvhiringidze kuita basa iroro. Kana ndikazviudza kuti ndinofanira kuita chakati ndinobva ndatochiita.”—Alexis.
Zano “Basa rose raunoda kuita rinozopera kana uchinge wariita. Ita basa racho panzvimbo pokuti urambe uchinetseka. Ukadaro hauzonetseki.”—Jordan.
Nhema. Unogona kumbosendeka basa nekuda kwezvikonzero zvakanaka. Somuenzaniso, kunonoka kutanga basa kunogona kukupa mukana wokuti uwane mamwe mashoko nezvebasa racho, uronge mashandiro auchaita, kana kuti uite chisarudzo chakanaka.—Zvinotaurwa neBhaibheri: Zvirevo 21:5.
Chokwadi. Unogona kusiya tsika dzakaipa. Chinokubatsira kuita izvi kuisa pfungwa dzako pakubatsirwa kwaunoitwa kana uchinge wasiya tsika yako.—Zvinotaurwa neBhaibheri: VaEfeso 4:22, 23.
Nhema. Kakawanda hazviwanzoitiki. Zvinoitika ndezvokuti kuwana nguva yakakwana uye kugara waronga maitirwo ebasa racho ndiko kuchaita unyatsoita basa rako nemazvo.—Zvinotaurwa neBhaibheri: Zvirevo 15:28.